GO'AAN: Maamulka Man United Iyo Solskjaer Oo Go'aamiyay Qiimaha Ay Paul Pogba Kaga Samri Karaan Xagaagan & Real Madrid Oo Markeeda Go'aan Gaadhi Doonta. - Gool24.Net
Maamulka sarre ee kooxda Manchester United oo uu ku jiro tababaraha kooxda ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa go’aamiyay wax ku saabsan arrimaha suuqa kala iibsiga ee xagaagan gaar ahaan xiddiga khadka dhexe ee kooxdaas ee Paul Pogba.
Solskjaer ayaa rajaynaya inuu sameeyo dib u habayn safka kooxdiisa ah kaddib xilli ciyaareed adag oo ay kooxdiisu kasoo gudubtay.
Man United ayaa kor u kac wanaagsan samaysay markii kooxda loo magacaabay Solskjaer bishii December balse xaalada ayaa xumaatay waxaana ay soo dhibtoodeen toddobaadyadii ugu dambeeyay.
Iyadoo ay sidaas tahay ayaa la filayaa in ay jiri doonaan xiddigo kooxda soo gaadha iyo kuwo baxa labadaba waxaana liiska xiddigaha ay macquulka tahay inay ka baxaan albaabka Old Trafford kamid ah Alexis Sanchez iyo Anthony Martial.
Haddaba, Iyadoo liiska xiddigaha uu mustaqbalkoodu cirka ku shareeran yahay uu ugu horreeyo Pogba ayaa il wareedka TuttoMercatoWeb uu sheegayaa in maamulka kooxdu ay go’aamiyeen rabitaankooda ah inay kooxda kusii haystaan.
Iyadoo ay jirto cabsida ah in Real Madrid ay la wareegto Paul ayaa la sheegayaa in maamulka kooxdu ay sidoo kale isku waafaqeen qiimo dhan 140 Milyan oo euros oo ah inta ay kaga samri karaan haddiiba ay fasaxaan.
Bishii hore ayaa mar wax laga weydiiyay Ole uu sheegay in aysan jirin wax kubadda cagta dhexdeeda si buuxda loo damaanad qaadi karaa balse uu rajaynayo in Pogba uu kusii nagaadi doono Old Trafford.
OGS ayaa wakhtigaas yidhi “Kubadda cagta dhexdeeda waxba ma balanqaadi karaysid laakiin haa waxaan filayaa in Paul uu halkan joogi doono”